ခံချင်​နေတဲ့အပျိုကြီး – Grab Love Story
“ အော်……ဘယ်သူလဲလို့… မမမာ….လာလေ…ထိုင်….”
သိလျှက်နှင့် ဧည့်ဝတ်စကားဆိုကာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်..။ ဒေါ်နီမာက ယောက်ျားလုပ်စာ ထိုင်စား၊ အတင်းပြော အိမ်လည်၊ ဒါသည်သာ သူမအလုပ်..။ အောင်သွယ်က ဝါသနာ ကြီးလိုက်သေး..၊ အပျိုလေး…အပျိုဖြန်းတွေဆို ဒေါ်နီမာနှင့် ကြာကြာမနေရဲ..။
အောင်သွယ်လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် လင်ကိစ္စ သားကိစ္စတွေကို တစ်တစ်ခွခွ မြိန်ရေယှက်ရေ ပြောတတ်သည်..။ ဝါသနာကြီးသော မြီးကောင်ပေါက်မလေးတွေကတော့ ရှက်တတ်သော အမူအယာဖြင့် ဒေါ်နီမာ ပြောသော မစားရဝခမန်း ခြင်ထောင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နှင့် ရင်တခုန်ခုန် အာသာမပြေ နားထောင်ချင်တတ်ကြသည်..။
ဒေါ်နီမာက မခင်သက်ဘေးမှ ဖင်ထိုင်ခုံ တစ်လုံးကို ဆွဲယူပြီး နံရံ၌ မှီကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့… သိလျှက်နှင့် ကြက်သားတွေလားဟု မေးလိုက်သေး၏။
“ ဟုတ်တယ်…မမမာရေ… ဒီနေ့ စနေနေ့ဆိုတော့ သင်တန်းတက်နေတဲ့ ဆွေဆွေတို့ လာမှာမို့ ဟင်းကောင်းလေး ချက်ကျွေးချင်လို့ ဆိုပါတော့….”
“ ထားအိ သူတို့ ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့ မန္တလေးတဲ့..၊ အခုမနက်ပဲ ထွက်သွားတယ်…လေ…”
“ အင်း…အပျိုကြီးတို့ပဲ ကောင်းတယ်..၊ လင်ယူသားမွေး ကိစ္စလဲ မလုပ်မရှုတ်တော့ဘူး..၊ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နော်.. စားချင်မှ ကိုယ်ကြိုက်သလို…..ဟင်းဟင်း…”
ဟု အကဲစမ်းသည့်အနေဖြင့် ဆိုလိုက်သည်..။ အပျိုကြီး က ဘာမှ မပြောပဲ အောက်ငုံ့၍ ခုတ်ထစ်စရာ အသားများကို သာ ရွေးရင်း ပြုံးနေလိုက်သည်..။ အတွင်းခံမပါပဲ စပို့ရှပ် အိအိတိုတိုကိုသာ ဝတ်ထားသမို့ ရင်သားများ အထင်းသား ပုံပေါ်နေကာ အသားတုံးကို ခုတ်လိုက်တိုင်း တုန်တုန် .. တုန်တုန်နှင့် လှုပ်ခါနေသော မခင်သက်၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်ချက်ကြည့်ရင်း …
“ ဝါကျွတ်တော့မယ်နော်… ”
ဟု မဆီမဆိုင် ဆိုလေသည်..။ အပျိုကြီးက …အင်း ဟု သံယောင်လိုက်၏..။ အေးလေ… အပျိုကြီးဘဝနဲ့ နေတာပဲ ကောင်းတယ် မသက်ရေ… သိလား..၊ ယောင်လို့များတော့ လင်ယူမယ် စိတ်မကူးလေနဲ့…”
ဒေါ်နီမာ ဆင်သော အကွက်ထဲသို့ တည့်တည့်ကြီး ဝင်လိုက်သည်..။ ဒေါ်နီမာက ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်လိုက်ကာ…
“ သဘောပြောတာပါတော်၊ ခုကာလ… အပျိုကြီး အပျိုကြီး ပေါင်လှန်ကြည့် လီးရာချည်း…ဆိုတဲ့ အထဲများ ကိုယ့်ညီမ ပါမလားလို့ပါ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသက်ကိုမို့ ပြောရအုံးမယ်၊ ဒီမယ်…ပါတော့ကော ဘာဖြစ်သေးလဲ အေ..နော်…၊ ဘယ်သူမှ မသိပြီးတာပဲဟာ..ကိုယ်တို့ကတော့ ရှင်းရှင်းပဲ ဒါမျိုးဆို လက်မနှေးထဲကပဲ…၊ ကိုယ်တို့များ ဆိုလေ ဒီမယ်…ဒီမယ်… ဒါသာကြည့်..(၁၄) နှစ်သမီးကထဲက အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့တာ.. ”
ဒေါ်နီမာ၏ သဘာဝကို မကြိုက်လှသော်လည်း ဒီတစ်ခါတော့ အပျိုကြီးကိုယ်နှိုက်က စိတ်ပါသလိုလိုမို့ သူပြောသမျှ မှေး၍ နားထောင်နေလိုက်သည်..။
“ မသက်… ဘယ်လိုမှ တော့ မအောင်းမေ့နဲ့နော်.. မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြောတာ…၊ မသက် ဆန္ဒရှိရင် ပြော..၊ မမမာက ပိုင်တယ်၊ ပိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေ အများကြီး … ငယ်ငယ်လား၊ ရွယ်တူလား၊ ဦးဦးအရွယ်လား၊ ပြော… အပျော်လဲရတယ်၊ ရေရှည်လဲ ရတယ်.. ရည်ရွယ်ထားရင် လက်ထပ်ချင်လဲ ရတယ် သိလား…”
“ ဘာ…ရပါတယ်…ဟုတ်လား…၊ အပျိုကြီး၊ ခေါ်ခဲ့လို့ ရပါတယ်လားဟင်…”
“ ဟုတ်ပါဘူး…. မမမာရဲ့.. ဒီလိုပဲ နေနေကျပဲ ဥစ္စာ…”
“ အဲဒါပြောတာပေါ့… မသက်တို့ ..အဲဒါတွေ ခက်တာ၊ ဒီမယ် .. မမမာကို မယုံလို့လား..”
“ ဟုတ်ပါဘူး… အေးဆေးပဲ နေချင်လို့…”
“ ဖြစ်ရပြီ.. ဒီမယ်… မသက်က အပျိုကြီးဆိုပေမယ့် တကယ့်ကို လုံးကြီးပေါက်လှကြီးမို့ ကိုယ်တို့က ပြောတာ..၊ ဒီအတိုင်းကြီး ပစ်ထားလိုက်တော့မှာလား… ၊ နှမျောစရာ….”
မခင်သက်က ဘေးသို့ စင်သွားသော ကြက်သားတုံးကို မမှီမကမ်း လှမ်းဆွဲလိုက်ရာ စောင်းလဲမလို ဖြစ်သွားပြီးမှ ထိုင်ခုံပေါ် ဖင်ထိုင်ရင်း ကျန်သော အသားတွေကို ခုတ်နေပြန်သည်..။
လဲမလိုလို ဖြစ်သွားသောကြောင့် သူမ၏ ထမီက ဖရိုဖရဲ အနားစ ပုံပျက်သွားကာ ပြန်ထိုင်လိုက်တော့ အောက်စလွတ်၍ နေတော့သည်..။ လက်မှာလဲ ဟင်းကိုင်နေခိုက်မို့ ပေပွနေသည်..။ ပြင်မထိုင်အား…။
ဒေါ်နီမာက ဟောင်းလောင်းကြီး ပေါ်နေသော မခင်သက် ပေါင်ခွကြားကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲက ပြုံးမိသည်..။ မခင်သက်ကတော့ သိဟန်မတူ..၊ သိလည်း မိန်းမချင်းမို့ အရေးမကြီးသလို ဆက်နေလိုက်ဟန် တူပါရဲ့..။
ဝါဝင်းသော ပေါင်တွင်းသားနှစ်ဖက်ကို အလင်းရောင်ဖြင့် အထင်းသား မြင်နေရသည်..။ စောက်ဖုတ်ကို အပီအပြင် မမြင်ရသော်လည်း စောက်ခုံနှင့် စောက်မွှေးတွေကိုတော့ မဲမဲချိတ်ချိတ် လိမ်လိမ်ရှုတ်ရှုတ်ကြီး တွေ့နေရသည်..။ ဟင်းချက်နေရင်း ဒေါ်နီမာက စကားလုံးဖြင့် လာပြီး ဆွခဲ့သည်မို့ ကြုံဖူးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တို့ကို တွေးမိရင်း မခင်သက်တစ်ယောက် တစ်ကိုယ်တည်း ရင်ဖိုနေမိရတော့သည်..။
တစ်မနက်လုံး အချက်အပြုတ် ကိစ္စများနှင့် နပမ်းလုံးနေရသည်..။ မီးဖိုချောင်ကိစ္စတွေ ပြီးသွားကာမှ လျှော်ဖွပ်စရာတွေ လျှော်ဖွပ်၊ ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလေး ဘာလေး လူးရန် မှန်တင်ခုံရှေ့ ထိုင်ဖြစ်ရတော့သည်..။
ရင်ရှားထားသော ရေစိုထမီကို လဲလိုက်ပြီး အခြောက်လဲလိုက်သည်.။ ဝတ်ပြီးကာမှ ထမီကလည်း ကွဲထားတာ အကြီးကြီး..။ မတတ်နိုင်..၊ ဘယ်သူရှိတာမှတ်လို့…။ ထမီအကွဲကို လှည့်ဝတ်လို့လဲ မလုံ..၊ အကွဲက နှစ်ကွဲ၊ ရှေ့ပို့တော့ နောက်က မလုံ၊ နောက်ပို့တော့ ရှေ့ကမလုံ၊ ကဲဟယ်..ဟု ဆိုကာ ရှေ့နောက် တစ်ကွဲစီ ပို့ရင်း ရင်ရှားလိုက်သည်..။ ပြီး.. သနပ်ခါး သွေးလိုက်၏။ မျက်နှာကို လူးပြီး ကိုယ်လုံးကို လူးရန် ထမီစကို ဖြည်ချလိုက်သည်..။
ဖွံ့ဖြိုးဝိုင်းစက်သော နို့ကြီးနှစ်လုံးက ခန့်ခန့်ကြီး ပေါ်လာ၏။ မှန်ထဲမှာ ဖွေးဖွေးမို့မို့ကြီး ပြူထွက်နေသော ကိုယ့်နို့နှစ်လုံးကို ငေးစိုက်နေရင်းက ကျောက်ပြင်ပေါ်မှ သနပ်ခါးကို လက်ဝါးဖြင့် ပွတ်၍ ဆွဲလိုက်ကာ လက်မောင်းသား အိအိနှင့် ကျောပြင် ဂုတ်သားတွေကို လူးနေခိုက်… ရှပ်ရှပ်..ရှပ်ရှပ် ခြေသံက ပေါ်လာပြန်၏။
“ အင်း……..မမမာတစ်ယောက် ပြောရတာ အားမရသေးလို့ တစ်ခါလာပြန်ပြီ ထင်ပါရဲ့..”
ခြေသံက အခန်းဝ၌ ရပ်သွား၏။ ထိုခြေသံသည် မခင်သက် ထင်ထားသလို ဒေါ်နီမာ၏ ခြေသံ မဟုတ်ဘဲ ပိုင်စိုး၏ ခြေသံဟု သိခဲ့လျှင် မခင်သက်တစ်ယောက် ဤသို့ ပရမ်းပတာကြီး နေမည့်ပုံ မပေါ်ပါ..။
ခုတော့… သူတို့နှစ်ယောက် ကြုံရပြန်ချေပြီ..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်………..။
ပိုင်စိုးသည် အရင်တစ်ခါ ကြုံခဲ့ဖူးသည်မို့ ဒီတစ်ခါ ဘာသံမှ မပေးတော့ဘဲ ဝင်လာခဲ့သည်..။ စင်စစ် ပိုင်စိုး မရိုးသား…၊ မရိုးသားခြင်းက ယခု ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုလေပြီဟု ဆိုရမည်လား မသိ၊ တံခါးဝသို့ ပိုင်စိုး အရောက် မခင်သက်တစ်ယောက် ခေါင်းကိုငုံ့၍ စိတ်ပါလက်ပါ သနပ်ခါး သွေးနေသည်..။
အသံမပေးသေးဘဲ ထိုမြင်ကွင်းကို ကြည့်နေမိ၏။ ဒေါ်ခင်သက်က ရှေ့ကိုသာ အားစိုက်ပြီး သွေးနေသည်မို့ ပိုင်စိုး ရောက်နေတာ မသိ၊ သူမ၏ ထမီအကွဲထဲမှ မို့အစ် ပြူထွက်နေသော ညာဘက်ခြမ်း တင်သားဖွေးဖွေးကြီးနှင့် အားစိုက်၍ ကုန်းသွေးလိုက်တိုင်း လှုပ်လှုပ်နေသော မှန်ထဲမှတဆင့် မြင်ရသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပိုင်စိုး ငေးကြည့်နေရင်း အာခေါင်များ ခြောက်လာပါတော့သည်..။
မခင်သက် ပြာပြာသလဲ ဖြစ်သွားကာ ပေါင်ရင်းအထိ လျှောကျနေသော ထမီကို ကမန်းကတန်း ကောက်ဝတ်သည်..။ သို့ပေမယ့် … ဖြစ်သလိုကြီး…။
ဟု ပလုံးပထွေး ရေရွတ်သလိုကြီး မေးလိုက်ရင်း … ဒိန်းဒိန်းခုန်သွားသော ရင်ကို ငြိမ်သွားအောင် ကြိုးစားရသည်..။
“ ခု…ခုပဲ..ဒေါ်…အဲလေ… မမသက်…ဒီနေ့ ဆွေဆွေ့ သွားခေါ်ရင်း လမ်းလဲကြုံနေတာနဲ့ ဒီ…ဒီကို ဝင်လာတာပါ…”
မခင်သက်တစ်ယောက် ပိုင်စိုးရှေ့၌ မလုံမလဲ အဝတ်ဖြင့် ရင်ခုန်လှုပ်ရှားနေကာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းပင် မသိတတ်အောင် ဖြစ်နေသည်..။
ဟု တုန်ဟိုက်စွာ ဆိုသော်လည်း ပိုင်စိုးက မလှုပ်..၊ ကျောက်ရုပ်…။ သူမကိုသာ စူးစူးနစ်နစ်ကြီး စိုက်ကြည့်နေတော့သည်..။ ခင်သက် ဗြုန်းကနဲ ရပ်လိုက်မိသည်။ ဒီတော့မှ သူ့ထမီက ကွဲနေတာ သတိရပြီး ခုတင်ခြေရင်း၌ လွှားတင်ထားသည့် ထမီတစ်ထည်ကို ကုန်း၍ ဆွဲလိုက်ရာ ကျောပြင်နှင့် နောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး တင်းသွားပြီး တင်ပါးနှစ်ခုကြားနှင့် တည့်နေသော အကွဲစကြားမှ သွေးကြွစူအက်နေသော သူမစောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မို့ခုံးပြူထွက်လာတော့သည်..။
ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှ ဆေးအတွက် လေးရလေပြီ.။
ပိုင်စိုး စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေသည်..။ ရင်ထဲမှာ ပူကနဲ ဖြစ်သွားကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ခပ်ကုန်းကုန်းကြီး ဖြစ်နေသော မခင်သက်ရှိရာသို့ သွက်သွက်ကြီး လှမ်းသွားမိလေ၏။
ဟု ဆိုကာ ပါးကိုရိုက်မည်ဟု လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးကာမှ ဘယ်လိုက ဘယ်လိုဖြစ်သည်မသိ၊ မခင်သက်တစ်ယောက် မျက်နှာကို လက်ဝါးဖြင့် အုပ်ကာ ရှိုက်နေပါတော့သည်.။
“ မမသက်…ကျ..ကျနော်…ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ်… ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှန်း မသိ ဖြစ်သွားလို့ပါ… ကျနော့်အပြစ်ပါ… မမသက်ရယ်… ကျနော့်ကို ရိုက်ပါ…ရိုက်လိုက်စမ်းပါဗျာ….”
ပိုင်စိုးက မခင်သက်ရှေ့သို့ တိုး၍ ပါးကို အပ်လေသည်။ တကယ်တော့ အပျိုကြီးကိုယ်တိုင်လည်း ဘာဖြစ်၍ ဘာဖြစ်မှန်း သူကိုယ်တိုင် မသိ၊ သူ့ကိုလည်း မရိုက်ရက်ပါ..။ ရိုက်ရန်လည်း မရည်ရွယ်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ထူပူသွားပြီး အရှက်ရော ရမ္မက်ပါ ပေါင်းစပ်မိပြီး ဒေါသဘက်သို့ ကူးသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါချေ၏။
“ ဒါဆို…….. ဟိုဘက်လှည့်…” ဟု ဆိုတော့လည်း … “ လှည့်ဘူး ” … တဲ့…။
စောစောက သူ့ကို ရိုက်မလို လုပ်ခဲ့တာ သူမပင် မဟုတ်တော့သလို … မခင်သက်တစ်ယောက် မပွင့်တပွင့် ပြုံးကာ ထမီကို လဲလိုက်တော့သည်..။ ရှပ်ကနဲ လှပ်ကနဲ ပွင့်သွားသော ရင်သား အညွန့်ဖွေးဖွေးကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သော ပိုင်စိုးကလည်း ငါးဖယ်ပြုံး ပြုံးလို့…….။
“ သွား……. လူကို လိုက်ကြည့်နေ… ဆွေဆွေလာမှ နင့်ယောက်ျား နင်နိုင်အောင်ထိန်းလို့ ပြောရအုံးမယ်…ဟင်း…” ပိုင်စိုးက ဘာမှမပြောပဲ ရှေ့သို့ တိုးလာသည်..။ တစ်လှမ်းနှစ်လှမ်း မခင်သက်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် ဆုတ် ဆုတ်ပေးနေမိသည်။ ခုတင်ဘောင်နှင့် ထိသွားတော့ ဆက်ဆုတ်လို့ မရတော့။ ပိုင်စိုးက မခင်သက်နှင့် ကပ်သွားအောင် မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီး သူမ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ဖွဖွ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း….
ပိုင်စိုးက လှိုက်ဖိုစွာ ဆိုလိုက်၏။
“ သွား…သွားကွာ…. မောင်ပိုင်စိုး မလုပ်နဲ့……”
“ ဖယ်…….ဖယ် ပါ…..”
မခင်သက်က မောလျှသော အသံဖြင့် ရေရွတ်ရင်း လက်ကို ဖယ်သော်လည်း လက်က ပြုတ်မသွားပါချေ..။ ပို၍ ပင် တင်းကျပ်သွား၏။
ပိုင်စိုးက နောက်မဆုတ်ပါချေ။ သူမ၏ ကျောပြင်ကို လက်ပြောင်းပြီး ခပ်တင်းတင်း ဆွဲယူလိုက်ရာ မခင်သက်၏ ရေဆေးငါးကြီးပမာ တစ်လုံးတစ်ခဲနှင့် အိစက်နေသော မထိရက်စရာ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်မိလျှက်သား ဖြစ်ရချေပြီ..။
“ ပိုင်စိုး….မမသက် ပြောနေတယ်..၊ ဒေါ်လေး ပြောနေတယ်နော်… ဖယ်ပါလို့ဆို.. မသင့်ပါဘူး..ဖယ်ကွာ…”
ဒေါ်လေးရော၊ ဒေါ်ဒေါ်ရော၊ မမသက်ရော ဝေါဟာရမျိုးစုံ သုံးကာ မခင်သက် ရုန်းရှာပါသေး၏။ လှုပ်ခတ်နေသော ရင်က တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်နေသည်။ ပြီးတော့ ပိုင်စိုး ရင်အုပ်နှင့် ပိညှပ်နေတော့ ရုန်း၍လည်း မလွယ်ပါတကား..။
ပိုင်စိုးက သူမ၏ ခါးနှင့် မို့ကားထွားအိသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဖိဆုပ်နှိပ်နယ်ရင်း….
ထိုသို့ ရုန်းမိကာမှ ခြေမခိုင်သလို ဖြစ်ပြီး ယိုင်ကျသွားတော့သည်.။
ပိုင်စိုးက အခွင့်ကောင်းကို အလွတ်မပေးဘဲ ယိုင်သွားသော မခင်သက် ကိုယ်လုံးကို ခုတင်ပေါ် လှဲသိပ်လိုက်ကာ သူမထက်သို့ တက်ပြီး မှောက်လိုက်လေသည်..။ သူမ မျက်နှာပေါ် အုပ်မိုးကာ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းပစ်လိုက်မိတော့သည်..။
ရှင်းသန့်ပြီး သနပ်ခါးလိမ်းပြီးစမို့ မွှေးလို့ ကြိုင်လို့ … သူ့ကိုယ်ကတော့ ချွေးနံ့တွေနဲ့ နံစော်နေမလား…။ ဒေါ်ခင်သက် ရင်တွေ အရမ်းဖိုသွားရသည်..။ ခုလို ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အနမ်း မခံရတာ ကြာပြီလေ..။ အောက်မှ မလှုပ်သာ လှုပ်သာ လှုပ်ရင်း ရုန်းနေမိသော်လည်း မိန်းမနှင့် ယောက်ျား အားချင်း မမျှပါချေ..။
တကယ်တော့ ရုန်းသာ ရုန်းနေရသည် စိတ်ထဲက သိပ်မပါလှချေ..။ ပိုင်စိုးက သူမနှုတ်ခမ်းကို ငုံခဲ၍ စုပ်လိုက်လေသော်ကား အပျိုကြီးခမျာ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းသွားကာ ထွန့်ထွန့်လူးလူး ဖြစ်သွားရသည်..။
“ ပိုင်စိုး…. တော်ကွာ…နော်… ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်ပါတော့..၊ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး..၊ ပြီးတော့ တံခါးကြီးကလဲ ပွင့်လို့….”
ပိုင်စိုးက ခုတင်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်းကာ အပြင်သို့ ထွက်သွားသည်..။ တစ်မိနစ် မကြာလိုက်..၊ ပြန်ရောက်လာပြန်သည်..။ ပိုင်စိုး ပြန်ရောက်လာတော့ မခင်သက်က ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး မှိန်းနေရှာသည်..။ ရင်ရှားထားသော ထမီကို အထက်သို့ရောက်အောင် ဆွဲတင်လိုက်ရင်း ဝင်လာသော ပိုင်စိုးကို ကြည့်ကာ ….
“ ဘာလုပတွာလဲ…..” ဟု ဆို၏။
ပိုင်စိုး ပြောပြောဆိုဆို ခုတင်ပေါ် တက်လှဲလိုက်ကာ လည်ပင်းရောက်အောင် မတင်ထားသော ထမီစကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲပြီး လျှောချလိုက်လေရာ ရင်သားနှစ်မွှာ ဘွားကနဲ ပေါ်သွားသည်..။
ရီဝေသော မျက်ဝန်းများဖြင့် မျက်စောင်းလှလှ ထိုးနေခိုက် ပိုင်စိုးက အင်္ကျီနှင့် ပုဆိုးကို ခပ်သွက်သွက် ချွတ်ပစ်လိုက်လေတော့သည်..။
ပိုင်စိုးက သူမကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်ပင့်မကာ ထမီကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်လေရာ တင်ပါးနှင့် ထစ်ငြိနေသည်မို့ မခင်သက်က တင်ကို ကြွ၍ ပေးလိုက်မိသည်..။
ပိုင်စိုးက ထမီကို ကွင်းလုံးကျွတ်သည်အထိ ဆွဲချွတ်ပြီး ခုတင်အောက် ပုံထားလိုက်သည်..။ ခုတော့ မမသက် တစ်ယောက် ဆွေဆွေ့တာဝန်ကို ထမ်းရချေတော့မည်..။
ဆွေဆွေ့နေရာမှာ ငါပဲ ဖြစ်လိုက်ချင်ရဲ့ဟု မချင့်မရဲ ပေါ်ခဲ့ဖူးသော စိတ်ကူးတို့ တကယ်ဖြစ်လာချေတော့မည် ထင်ပါရဲ့…။
သင့်၏ မသင့်၏ မစဉ်းစားချင်တော့ပါ..။ ယခုအချိန်၌ ရမ္မက်မီးလျှံက ဝါးမြိုတောက်လောင်နေသည်မို့ ဒီမီးကိုသာ ငြိမ်းပစ်လိုက်ချင်၏။ ဒါပဲသိတော့သည်..။
ဆွေဆွေ သင်တန်းနားရက်တွေမှာ ပိုင်စိုးက အိမ်ခေါ် ခေါ်လာပြီး သူတို့လင်မယား တစ်ပတ်တစ်ခေါက် အိပ်ကြသည်..။ ခွဲနေရသော တစ်ပတ်စာကို အတိုးချ၍ လိုးကြတိုင်း တစ်ဖက်ခန်းမှ ဒေါ်လေးသက်တစ်ယောက် စိတ်တွေ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်ရသည်..။
ပိုင်စိုးလည်း ထူးမခြားနားပါပေ..။ ဆွေဆွေ့ကို သင်တန်းကိစ္စနှင့် ပစ္စည်းတွေ သယ်ပို့ပေးစဉ် အခေါက်က ဖြတ်ကနဲ အိမ်ထဲ ဝင်လာခိုက် ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ် ရုံမက တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးပါ ပြူးနေအောင် ပေါ်နေသည့် မခင်သက်၏ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို မြင်ခဲ့ရချိန်မှစ၍ ထိုမြင်ကွင်းက လွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်..။
ဆွေဆွေတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံး တစ်မျိုးစီ လှကြပါ၏။ ထားအိက အေရိုးဗစ်လည်း ကစားထားသူမို့ အဟိုက်အရှိုက် အဖိုတွေက တင်းတင်းပြည့်ပြည့် စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းသလို ဆွေဆွေကလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးတာတောင်မှ အချိုးအစားမပျက်ပဲ လိုး၍ မဝအောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် မယား..။
အပျိုကြီး စာရင်းဝင်နေသော်လည်း အစ်မကြီး အရွယ်မျှသာ..။ တည်တည်ခန့်ခန့်၊ ထွားထွားမို့မို့၊ အိအိစက်စက် တစ်လုံးတစ်ခဲကြီး လှသော အလှပိုင်ရှင်တစ်ယောက်..။ စိတ်ထဲကတော့ စိတ်ကူးနေခဲ့တာ ကြာပြီ..။ ကြာပြီဆို… သူမ၏ အားမနာစတမ်း ကြမ်းပစ်ချင်စရာ ကောင်းလှသော ရေဆေးငါး ခန္ဓာကို အတွင်းကျကျ သိခဲ့မြင်ခဲ့ရပြီးကတည်းက ဆိုပါတော့..။
ယခုတော့ .. ထိုရေဆေးငါးကြီးကို စားဖို့ ကိန်းကြုံပါပြီ..။ ပိုင်စိုးသည် ရေဆေးငါးကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ စားရန် အကြေးခွံခွာသည့် အနေဖြင့် ပက်လက်ကြီး ဖြစ်နေသော မခင်သက်၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးပေါ်သို့ အားပါပါ ပစ်၍ မှောက်လိုက်သည်..။
“ မမသက်ကို အပျိုကြီးဘဝက ချွတ်ပေးချင်လို့ပါ…မမရဲ့……” ပြောပြောဆိုဆို လေးငါးချက်မျှ ဆက်၍ ဆောင့်နေရာ မခင်သက်ခမျာ သဘောကျလျှက်ကပင်….
ဤသို့ ဆိုကာ သူ့ကျောကို လက်သီးဆုတ်နှင့် ထုကာ ထုကာ မကြာခင်ဖြစ်လာတော့မည့် အရေးအတွက် ရင်တွေခုန် ဖင်တွေတုန်လျှက် ပြုံးနေမိတော့သည်..။
ပိုင်စိုးက မခင်သက်၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို မျက်နှာအပ်လျှက် ဘယ်ညာလူးလိုက်သည်..။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တစ်လုံးစီ လူးလှိမ့်ပေးလိုက်သည်..။ နို့သီးခေါင်းကလေးများကို လျှာဖြင့် ကလိ၍ သွားဖြင့် မနာအောင် ငုံခဲပေးသည်.။
အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ခုလိုမျိုး ကလိတိတိဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ ဆွပေးနေသော အရသာကို မခံစားရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ မခင်သက်ခမျာ မနေတတ်လောက်အောင် မရိုးမရွဖြစ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကြွကြွရွရွ တွန့်လိမ်နေသဖြင့် ပိုင်စိုးက သူ့ကိုယ်လုံးဖြင့် ဖိကာ ဖိကာ ဆောင့်ပေးထိန်းပေးနေရသည်..။
ခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီမို့ မီးကလည်း ပွင့်ခဲ့ချေပြီ..။ မခင်သက်၏ ပေါင်နှစ်လုံးအရင်းပိုင်း၌ စိုစွတ်သော အရည်ကြည်တို့ စိမ့်ကနဲ စိုလာပြီမို့ အပေါ်မှကပ်၍ ဖိထားသော ပိုင်စိုး၏ ပေါင်ရင်းဆီးစပ်တို့၌ အစိုဓာတ် ကူးစက်ခဲ့သည်..။
ယခုလိုအချိန်၌ ကိုယ်က မလုပ်ချင်ပါဘူး ပြောလျှင်တောင် ထိုင်ရှိခိုးကာ လိုးပေးဘို့ တောင် တောင်းပန်တော့မည်ကို သိသော ပိုင်စိုးသည် အပျိုကြီးကို ရွသည်ထက် ရွလာအောင် အစွမ်းကုန် နှိုးဆွပေးနေတော့သည်..။
ဝမ်းပြင်သားတစ်လျှောက် ပတ်ပတ်လည် သွားအောင် လျှာဖြင့် လျက်၍ ကလိပေးသည်..။ ချက်တွင်းနက်နက်ကလေးကို ပါးစပ်ဖြင့် ကလေးမြှူသလို မြှူနမ်းပေးလိုက်ရာ ဒေါ်ခင်သက်ခမျာ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်လျှက် ဖြတ်ဖြတ်လူးကာ ကြက်သီးတွေ ထသွားရတော့သည်..။
ပိုင်စိုးက မျက်နှာကို ဖြေးဖြေးချင်း အောက်သို့ ဆွဲချလာရင်း မခင်သက်၏ မိန်းမအင်္ဂါစပ် လွင်ပြင်ပေါ် မှောက်၍ ပွတ်ပေးလိုက်သည်..။ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးစမို့ အညစ်အကြေး ကင်းစင်၍ လှပလွန်းသော မမသက်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးက သူ့ကို ကြိုဆိုနေသည်…။
သူက မမသက် စောက်ဖုတ်ကြီးကို မျက်နှာအနည်းငယ် ခွာလျှက် အနီးကပ် ကြည့်ရင်း တံတွေးကို မျိုချလိုက်သည်..။
မခင်သက်ကမူ လက်ကို ပတ္တာယှက်သလို ယှက်၍ ခေါင်းတင်ကာ သူမ၏ လျှို့ဝှက်ရတနာကို တပ်မက်စွာ စူးစိုက်ကြည့်နေသော ပိုင်စိုး၏ မျက်နှာကို ကြည့်နေမိသည်..။
“ အင်း…..ပိုင်စိုးလေး….ပိုင်စိုးလေး…ဒီနေ့ည ဆွေဆွေလာတဲ့အထိတောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူး…အေးလေ…..သူ့ခမျာလဲ မိန်းမနဲ့ ကြာကြာခွဲနေရတော့ ဆာနေရှာမှာပေါ့….”
ပိုင်စိုးက မခင်သက်၏ အရည်ကြည်များ စိုရွှဲနေပြီး ဖူးဖူးမို့မို့ကြီး ခုံးကြွနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို တဝကြီး ကြည့်ပြီး အစေ့လေးကို လျှာဖြင့် တို့ထိကစားပေးလိုက်ရာ အပျိုကြီးခမျာ တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူသွားကာ ဘေးသို့ကားစွင့်လျှံကျနေသော တင်ပါးသားကြီးများ ကျုံ့၍တက်သွားသည်အထိ နေမထိ ထိုင်မသာ လူးလွန့်သွားရရှာသည်..။
ပိုင်စိုးက တဆက်တည်းပင် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကြီး ပေါ်သွားအောင် လက်ချောင်းများဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး လျှာကိုလိပ်ကာ ပေါ်လာသည့် အတွင်းသားနုနုထဲသို့ သွင်း၍ ကစားလိုက်သည်..။
ပိုင်စိုး၏ ကလိချက် ထိချက်များက မခင်သက်၏ အဓိက ခလုပ်များကိုချည်း ကိုင်နေသလို ဖြစ်ရကား အစာငတ်နေသော ကျားသစ်မတစ်ကောင် အစာကောင်းကို တွေ့ရာ၌ ဣနြေ္ဒမရအောင် ဖြစ်သွားသကဲ့သို့ ပြတ်လပ်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည့် မမသက်တစ်ယောက် ပိုင်စိုး၏ အကောင်းစား ပြုစုပေးမှုကို ဖင်တကြွကြွ ရင်တမမဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ကော့ပျံကာ ဖြတ်ဖြတ်လူး ဆတ်ဆတ်ခါဖြင့် ဖီလင်တွေ အဆင့်ဆင့် တက်ရပါချေပြီ..။
အားမလို အားမရဖြစ်လှစွာ ပိုင်စိုး ခေါင်းကို မမှီမကမ်း ဆွဲ၍ ဆံပင်တွေကို ဖွချေပေးနေမိသည်..။ အပျိုကြီးတစ်ယောက် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်နေပြီကို သိသော ပိုင်စိုးက အရှိန်ကို မလျှော့ပဲ လက်နှစ်ဖက်ကို ရင်ညွန့်ဆီသို့ လှမ်းလိုက်သည်..။
သူ့လက်နှစ်ဖက်ထဲ ပြည့်လျှံနေအောင် ဆုတ်ကိုင်မိသော မမသက်၏ အိစက်ထွားကြိုင်းလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားမနာတမ်း ဆုတ်ချေပွတ်လှိမ့်ပေးရင်း သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျ မွှေ၍ လျက်လိုက်၊ ကလိလိုက်၊ သွားဖြင့် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ကိုက်ပေးလိုက် လုပ်နေလေရာ ခြင်္သေ့မင်းပြုသမျှ နုနေရရှာသည့် သမင်ငယ်လေးပမာ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းမှုတ်၍ လူးကာလွန့်ကာဖြင့် မမသက်တစ်ယောက် ကြိတ်မှိတ် ခံစားနေရရှာပါလေ၏..။ ပိုင်စိုးကမူ မလျှော့ရေးချ မလျှော့..။
ကြာသော် မမသက်တစ်ယောက် မနေနိုင်လွန်းတော့ပြီမို့ သူပြုသမျှ အကောင်းချည်း ဖြစ်နေသော်လည်း ဒီလောက်ကြီး ကောင်းလွန်းနေခြင်းကို လုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့ပါ..။
“ မောင်….မောင်လေး …ပိုင် …စိုး……အား…….အား…..ရှီး…ကျွတ် ကျွတ်…အ….ရှီး မောင်လေး…တော်……တော်တော့ကွာ… မမသက်…အီး….ဟီး….ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ်…”
မခင်သက်တစ်ယောက် ဤကဲ့သို့ တားမြစ်ရသည်အထိ ဖြစ်လာပါတော့၏။
ဒါတောင် ပိုင်စိုးက မလျှော့သေးဘဲ နှစ်မိနစ်သာသာမျှ ဆက်၍ ဆုတ်ပေး စုပ်ပေး မှုတ်ပေး နေပြန်ရာ မမသက်ခမျာ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့သလို ဆက်၍သာ အဆွ ခံနေရရှာသည်..။
“ မောင်လေး…မ…..မမ ကို သနား ပါကွယ်… နော်…အ..အား… ဘယ်.လိုမှ မနေ နိုင်တော့ဘူး…လိုး ….လိုးတော့နော်…လိုးပါတော့ ကွာ နော်…..မောင်….မောင်လေး…အား…..အင်း…ရှီး ကျွတ်…ကျွတ်…”
“ မမ..ကျနော် မှုတ်ပေးတာ ကြိုက်လား ဟင်…ကောင်းလား…”
မခင်သက်တစ်ယောက် တော်တော်နှင့် စကားမပြန်နိုင်ရှာ…။ အတန်ကြာမှ ဟင်း ခနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီး မှုတ်ထုတ်ကာ….
“ သေ…..သေတော့မယ်… ဒီမှာ မ….မမ ဘယ်လောက်ထိ ကောင်း ကောင်းနေလဲ မင်း …မသိဘူး.. ဟင်း ဟင်း……ဟဲ….အင်း…ဟင်း…လိုး လိုးပေးပါတော့ မောင်လေးရယ်နော်…. နော်လို့….ဟင်း…တကထဲမှ လူကို ဣနြေ္ဒမရအောင်ကို မှုတ်တော့တာပဲ…တော်တော်ဆိုးတယ်… လုပ်…လုပ်တော့ မြန်မြန်လေး…ဟင်း အင်း…”
“ မောင်လေးက မမသက် အရသာ ရှိသထက် ရှိအောင်လို့ပါ..၊ မမကလဲ ဒီလောက်ကောင်းနေတာကိုများ စိတ်ဆိုးရတယ်..လို့…”
“ အင်း ….ဟင်း…စိတ်ဆိုးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးဟဲ့..၊ သေနာလေးရဲ့.. ဒီက သိပ်ပြီး အလိုးခံချင်လွန်းလို့ ပြောနေတာ…အင်း…..အမေ့..အဲ့…….ဟင်း ကြည့်ပါလားလို့…၊ ဟင်….လိုးတော့လို့…”
ပိုင်စိုးက အမှုတ်ကိစ္စကို ရပ်နား၍ အလုပ်ကိစ္စဝင်ရန် ပြင်ဆင်လေသည်..။
ခပ်မြန်မြန်ပင် သူမ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဖြဲလိုက်ကာ ဟပြီး ခွဲပြီးဖြစ်သွားသော ပေါင်နှစ်လုံးကြား ဒူးထောက်၍ ထိုင်လိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသော ဒူးကောက်ကွေးကို ပင့်၍ တွန်းတင်လိုက်သည်..။
ဒူးကောက်ကွေးမှ အထက်ပိုင်း ပေါင်တံနှစ်ချောင်းက ဘေးသို့ ကားနေရာမှ စုထောင်သွားကာ ဒူးကွေးမှ အောက် ခြေသလုံးပိုင်းသည် အောက်သို့ ညွတ်ကျနေရကား မခင်သက်၏ တင်ပါးအောက်ပိုင်းသည် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ပုံစံဖြစ်နေလေသည်..။
ပိုင်စိုးက လိင်တံထိပ်ဖူးကို မခင်သက် စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းဝနှင့်တေ့ဆက် ဆက်နေရာ တော်တော်နှင့် မတည့်..။ စိတ်မရှည်တော့သော မမသက်က … ..
ဟု ခပ်ပြုံးပြုံးလေးဆိုရင်း ပိုင်စိုး လီးတံထိပ်ဖူးကို လက်ချောင်းနုနုလေးများဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ကာ သူမစောက်ခေါင်းဝနှင့် ဆက်ပေးလိုက်တော့မှ ပိုင်စိုးက တင်ပါးကို ဖိ၍ အားစိုက်ကာ နှစ်လိုက်တော့သည်..။ ဇွိ…ဇွိ….ဇွိ….. မြည်သံပေး၍ သူ့လထစ်ကြီး နစ်ဝင်သွားသမို့ မခင်သက်တစ်ယောက် စောစောကလို မပြုံးနိုင်တော့ရှာပဲ မျက်လုံးလေးကို မှေး ပါးစပ်လေးကို ဟကာ ကာမအရသာကို ယစ်မူးခံစားနေပါတော့သည်..။
လိုးထည့်လိုက်ရသည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလွန်းလှပါ၏။ အနမ်းအရှုပ် အမှုတ် အလျက် စုံလင်စွာဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ နှူးထား၍ နူးအိ ဖောင်းရွနေတာတောင်မှ ပိုင်စိုး လထစ်ကြီးတစ်ချောင်းလုံး ခပ်စီးစီး ခပ်ကြပ်ကြပ် ဝင်သွားရသည်..။
ရွှပ်ခနဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝင်ခြင်း မဟုတ်ပါ..။ ဇိကနဲ တွန်း၍ ဝင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်..။
ရင်သားတွေ ဖင်သားတွေက ဆွေဆွေ့ထက် ထွား၍ ကားကားမို့မို့ ဖောင်းဖောင်းကြွကြွကြီးမို့ လိုးမကောင်းလောက်ဘူး ထင်ထားခဲ့သည်မှာ မှားပြီ..။
မမသက်မတော့ ပြည့်တင်း အိကားသော အသားဆိုင်များကြောင့် စောက်ဖုတ်က ညှပ်သလို ဖြစ်နေ၍လား မသိ..။ ကြီးမားသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်နှင့် ဘာမျှပင် မဆိုင်..။ စီးစီးပိုင်ပိုင်ကြီး …လိုး၍ ကောင်းလွန်းလောက်ရုံ အနေတော်လေး ဖြစ်နေသည်..။
ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါ၏.။ ဆွေဆွေလဲ ခုမှသာပါ..။ ညားကာစကများဆို..တော်ပါတော့ဟု တားယူရလောက်အောင် သူမခမျာ နာကျင်စွာ အလိုးခံခဲ့ရသည်..။
အခုတော့ နေ့တိုင်းညတိုင်း ဝင်နေကျ ထွက်နေကျမို့ ဒီလီးကြီး၏ လုံးပတ်နှင့် အရှည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိနေချေပြီ..။
မမသက်ကတော့ တစ်ခါမှ မခံရသေးတဲ့ စောက်ဖုတ်မို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် မခံရတာ ကြာလို့လားတော့ မသိ… လိုးရတာ ကြပ်ကြပ်သပ်သပ် ရှိလွန်းလှသည်..။
ပိုင်စိုးက အဆုံးထိ ဝင်သွားသော သူ့လီးကြီးကို ပြန်နှုတ်၊ ပြန်ထိုးလိုက်ဖြင့် အသာလေး မှေးပြီး လိုးဆောင့်နေလေသည်..။
“ လိုးကွာ….အင်း ဟင်း….ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးပေးပါနော်… အင်း ဟင့်…..အမလေး…ကောင်း …. ကောင်းလိုက်တာ…ဟုတ်…ဟုတ်တယ်…အင်း ဟုတ်ပြီ…၊ ကျွတ်..ကျွတ်…ရှီး…….ရှီး….အီး အင့်..အား…ဆောင့်…ဆောင့်……. နာနာလေး ဆောင့်… အေး …အေးကွယ်….လိုး …လိုး…အားရပါးရသာ လိုး…မမ စောက်ဖုတ်ကြီး ကွဲချင် ကွဲသွားပစေ… အား…အင်း …ကျွတ်..ကျွတ်….ရှီး…အား…အင့် ဟင့်…. ဟ…အား…အီး….ဟီး….အ…….”
မခင်သက်တစ်ယောက် ဟန်ဆောင်မှုတွေ တစ်ခုမကျန် ကွာကျသွားပြီး.. သူမဆန္ဒကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘဲ နှုတ်မှ ဖွင့်ဟရတော့၏..။
သူမ၏ မျက်နှာ အမူအယာကလည်း ရမ္မက်အခိုးအလျှံ များဖြင့် ရီဝေ တက်ကြွ၍ ထူးထူးကဲကဲ တပ်မက်ချင်စရာ လှပလွန်းနေတော့သည်..။
ပိုင်စိုးက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလှသော မမသက်၏ ရမ္မက်လှိုင်းကြွ မျက်နှာပေးကို တစိမ့်စိမ့် ရှုစားရင်း ရာဂစိတ်တို့ ကြွသထက် ကြွလာကာ မမသက် အလိုကျ အစွမ်းကုန် အားသွင်းပြီး ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ပေးတော့သည်..။
ကြောင်ခံတွင်းပျက်နှင့် ဇရက်တောင်ပံကျိုးတို့ တွေ့ကြသည့်ပွဲမို့လား မသိ၊ ဖိုနှင့်မတို့ အချစ်နယ်ကျွံပြီး ကာမဂုဏ် ခံစားနေကြပုံမှာ ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းလှတော့သည်..။
အတန်ကြာမျှ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆောင့် ဆောင့်လိုးနေပြီးမှ ခဏရပ်ကာ မမသက်၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဘယ်ဖက်သို့ စောင်းပစ်လိုက်သည်..။
မမသက် ပိုင်စိုး ပြင်ဆင်ပေးသမျှ ငြိမ်၍ ခံနေလိုက်သည်..။ သူ့အလိုကျ ကြွက်သားများကို ဖြေလျှော့၍ ပေးထားလိုက်သည်..။ ကြိုက်သလိုသာ ပြင်ဆင် ၊ ကြိုက်သည့်ပုံစံဖြင့်သာ လိုးပေတော့ ကောင်ဆိုးလေး……မောင်ပိုင်စိုးလေးရေ…။ တစ်ဖက်သို့ စောင်းထားသည်မို့ မခင်သက်၏ ခါးက နိမ့်ဆင်းနေပြီး တင်ပါးကြီးတစ်ဖက်က ခုံး၍ ကွေးကာ မြင့်ကားနေသည်။
စူကား မို့မောက်နေသော ဖင်သားဆိုင်နှစ်မြွာက အိစက်ကာ နောက်သို့ ပစ်ထား၏။ တုတ်ခိုင်အိဖွေးသော ပေါင်တံလုံးကြီးနှစ်ခုက ပူးဆင့်နေသည်။ အရင်းပိုင်းချင်းမှာတော့ ခပ်ကွာကွာဟလို့ နေ၏။ ဘယ်ခြမ်း ပေါင်းလုံးရင်းက နောက်သို့ အနည်းငယ် ပစ်ထားကာ ညာခြမ်းပေါင်လုံးရင်းက ရှေ့သို့ တွန်းပို့ခံထားရသမို့ ပေါင်ရင်းခွဆုံရှိ လီးနှုတ်ပြီးကာစ မမသက်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးခမျာ စူအက်စူအက် ရွစိရွစိဖြစ်ကာ လီးကြီးဝင်လာတော့မည်ကို အဆင်သင့် စောင့်ကြိုနေဟန်ဖြင့် အသားနီများပင် လန်ထွက်တော့မလောက် မွတ်သိပ်နေရှာသည်။
ပိုင်စိုးက မမသက်၏ တင်ပါးခုံးခုံးပေါ် လက်တင်ကာ ဖင်ပြောင်ပြောင်နောက်၌ ကပ်လိုက်ပြီး အံကျဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်စူစူထဲသို့ ထိပ်ဖူးကို တေ့၍ နှစ်လိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ လျှောကနဲ ဝင်သွားပါ၏။ အနေအထားကလည်း ပေါင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲဟထားသလိုမို့ စောက်ဖုတ်ကြီးက စူစူမို့မို့ကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်။
အဆုံးအထိ သွင်းထားရာမှ ဆတ်ကနဲ ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး ကျွတ်လုကျွတ်ခင် ဖြစ်မှ အားစိုက်၍ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပြန်သည်။ တစ်စတစ်စ ဆောင့်ချက်များက ပြင်းထန်လာသည်။ သူက အားစိုက်၍ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဆောင့်လိုက်တိုင်း မမသက်၏ အိစက်ထွားမို့သော ရင်သားကြီး နှစ်မြွာက ယမ်းခါ၍ တအိအိ ဖြစ်နေတော့သည်။
သူမကလည်း အငြိမ်မနေပဲ တင်ကို နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပေးရင်း ညာလက်ဖြင့် သူ့ကိုယ်လုံးကို စမ်းမိစမ်းရာ စမ်း၍ ဆိတ်ဆွဲညှစ်လိမ်ကာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုနေသည်သို့ ရှိ၏။
ပိုင်စိုးကလည်း အိထွားကားပြန့်သော အပျိုကြီး၏ ဖင်သားဆိုင်ကြီးများနှင့် သူ့ဆီးခုံရင်းတို့ အားရှိပါးရှိ ပစ်ပစ်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဖတ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ မြည်ကာ တုန်ခနဲ တုန်ခနဲ အိတက်သွားသော နူးညံ့ဝင်းဝါသည့် တင်သားဆိုင်ကြီးများကို ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်သည်ထက် ပြင်းထန်လာသည်။
ဆောင့်ချက်ကလည်း အားပါလွန်းလှသဖြင့် ခံရသူမှာ မသက်သာပါ။ မမသက်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း မညှာမတာ ဆွဲယမ်း၍ အလှုပ်ခံနေရသော သစ်ပင်ငယ်လေးပမာလို ဖြစ်နေရှာသည်။
မမသက်၏ နှုတ်မှ ကောင်းလွန်းလှသော ကာမစည်းစိမ်ကြောင့် တအိအိ…တအအ…ညည်းသံလေးများကလည်း စည်းချက်ပမာ ထွက်ပေါ်လို့ နေပါ၏။
ပိုင်စိုးက ထွက်လုထွက်ခင်ဖြစ်နေသော သုတ်ကို ထိန်းသည့်အနေဖြင့် ဇွပ်ကနဲ အသံမြည်အောင် လီးတန်ကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ တင်းကျပ်နေအောင် ရိုက်ထားသည့် ခပ်တုတ်တုတ် စို့ကြီးတစ်ချောင်း မရှိတော့သလိုဖြစ်ကာ မမသက် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားရပြီး အ၇ှိန်မသတ်နိုင်ပဲ ပွစိပွစိ ဖြင့် ရွစိထိုးနေလေတော့သည်။
“ ဟုတ်တယ် မမသက် .. စိတ်ထဲမှာ မထိန်းနိုင်တော့လို့ ခဏနားလိုက်ရတာ… ဆက်သာ လိုးနေလို့ကတော့ လရေတွေ ထွက်ကုန်တော့မှာ…”
“ ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း… ထွက်ထွက် ဆောင့်သာဆောင့်ကွာ..၊ မမ အရမ်းကောင်းနေတာ…မောင်ရဲ့….”
ပိုင်စိုးက မခင်သက်၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးပေါ်သို့ တည့်တည့်မှောက်လိုက်ရာ သူ့လီးတန်ရှည်ကြီးက ဆီးစပ်ပေါ်ထိ မှေး၍ ပူနွေးနွေး စိုအိအိကြီး မေးတင်နေသည်။
“ ဟင်း……လုပ်တော့လေကွယ်…..လို့….”မခင်သက်က မောလျစွာ ဆိုရင်း သူ့ကို ရီဝေစွာ ကြည့်နေ၏။ သူက သူမနှုတ်ခမ်းကို ခပ်ကြာကြာလေး ငုံလိုက်ကာ မှေး၍ ခေတ္တ နားနေသည်။ ပြီးမှ ခါးကိုကြွလိုက်ပြီး သူမ၏ ဖြဲကားထားသော ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် တည့်တည့်ချိန်ကာ ထိုးထည့်လိုက်သော်လည်း ငနဲသား မောင်ရွှေလီးက ချော်ချော်ထွက်နေသည်..။
“ လွဲနေတယ်ဟဲ့…မောင်လေးရဲ့..၊ ဖယ်ဖယ်…မင်းဟာကြီး မထား၊ အင်း…ပေးပါဟာ…ကဲ..ဟုတ်..ဟုတ်ပြီ…ထည့်လိုက်တော့…ဒီအတိုင်းပဲ ထည့်လိုက်…ဟုတ်တယ်…အား….အိ..အီး…ကျွတ်..ကျွတ်… ဆောင့်..ဆောင့်ကွယ်… အီး…ရှီး…..မောင်..မောင်လေး…အား…ဆောင့်…ဆောင့်..နာ နာလေး…အင်း..အ….အဲ…ဟုတ်ပီ…ရှီး….ကျွတ်..ကျွတ်…အမေ့…အင့်…ဟီး…..ဟင်း…အား..ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အား…..”
သူမ၏ လှုပ်ရှားမှုများအရ အထွတ်အထိပ်သို့ သူမ ရောက်နေပြီဟု ပိုင်စိုး အတတ်သိလိုက်၏။ သူက မမသက်၏ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို အုံအရင်းမှ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ပြီးမှ အသက်ကို ဝအောင်ရှူလိုက်ကာ ခါးကို မြှောက်ကာ ပင့်ကာ အားရှိပါးရှိ အသားကုန်ကြုံး၍ လိုးလေတော့သည်..။
ပိုင်စိုး ဆောင့်ချက်များက အားမာန်ပါလှသလို အောက်မှနေ၍ စကောဝိုင်းမွှေ့သလို ဖင်ဆုံကြီးနှစ်ဖက်ကို လှည့်ကာ ဝိုက်ကာ စိတ်တိုင်းကျ လှုပ်၍ အလိုးခံပေးနေသော မမသက်၏ အပင့်..အရှိုက် အဟိုက်အဝေ့တို့ကလည်း မာန်ပါလှချေ၏..။ ဘာမှ မကြာလိုက်…။
ပိုင်စိုး၏ လချောင်းကြီးတစ်ခုလုံး ယားကျိကျိနှင့် ကျင်တင်တင် ဖြစ်လာကာ တင်းတောင့်လာပြီး တစ်ပတ်စာ သိုလှောင်ထားခဲ့သော ဆွေဆွေ့အတွက် သုတ်ရည်တွေကို ဒေါ်လေးသက် စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထုတ်လိုက်ရတော့သည်..။
ပူနွေးစေးပျစ်သော သုတ်ရည်တို့က သူမ၏ သားအိမ်ဝကို အရှိန်ဖြင့် ပက်ဖျန်းလေပြီတကား..။
ခပ်ဝေးဝေး လမ်းမဆီမှ ကားသံ ၊ ကလေးများ၏ ဆော့ကစားသံ၊ လူသံ အချို့ကို ကြားနေရ၏။ ဘာလိုလိုနှင့် ပိုင်စိုးနှင့် မခင်သက်တို့၏ ကာမလွန်ဆွဲပွဲကြီး ဆင်နွှဲချိန်မှာ တစ်နာရီကျော်ကျော်မျှ ကြာလေသည်..။
ကြာဆို မမသက် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးချင်လာသည်အထိ စောင့်စားရ နှူးနှပ်ရတာကိုက နာရီဝက်နီးပါး ရှိခဲ့သည်ကိုး..။
စောင့်စားရကျိုး၊ ကြိုးစားရကျိုး နပ်ပါလေ၏။ ပိုင်စိုး အိမ်က ထွက်သွားသောအခါ ၃ နာရီတောင် ထိုးလုပြီ..။ သူက မမသက်ကို အနမ်းဖြင့် နှုတ်ဆက်ကာ ခပ်သွက်သွက်ကလေး ထွက်သွားလေသည်..။
ပြီး….မမသက်၏ ဆန္ဒအရ တံခါးကို အပြင်မှ ကန့်လန့်ချသွားပေးခဲ့သည်.။ သူမကတော့ မစားရတာကြာပြီ ဖြစ်သော အနှစ်သက်ဆုံးသော ကာမအဟာရကို မွတ်သိပ် ဆာလောင်နေချိန်၌ တဝကြီး စားလိုက်ရသဖြင့် အစွမ်းကုန် ကျေနပ်၍ နေလေတော့သည်..။
ပိုင်စိုး၏ အဆုတ်အနယ် အဖိအဆောင့်တို့က တစ်ခါဆို ဆိုသလောက် အားပါလွန်းလှသဖြင့် လက်မောင်း၊ နို့အုံ၊ ဖင်ဆုံ၊ ခါးစပ်တို့၌ နာကျင်နေလေတော့သည်..။
အနာဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးကတော့ သူမ၏ လက်ရွေးစင် စောက်ဖုတ်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောဖို့ပင် လိုမည်မထင်ပါ..။
တစ်ချက် မှေးခနဲ ဖြစ်သွားပြီးမှ အအေးပတ်မည်စိုး၍ ခုတင်အောက် ရောက်နေသော ခြုံစောင်ပါးပါးလေးကို ဖြစ်သလို လွှမ်းကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပစ်လိုက်လေရာ အစာဝသွားပြီဖြစ်သော မခင်သက်တစ်ယောက် အပျိုကြီး စည်းစိမ် အပြည့်ဖြင့် ခပ်ကားကားကြီး အိပ်ပျော်သွားလေသည်..။
အိပ်ရာကနိုးတော့ နေတော်တော်ချိုနေပြီ..။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်လိုက်ရသဖြင့် လန်းဆန်းသွားသလို ရှိ၏။ လန်းသည်ထက် လန်းစေရန် ရေချိုးပစ်လိုက်သည်..။ သူ စွန့်ပစ်ထားခဲ့သည့် ကျိချွဲချွဲ အဖြူရည်များ ပေပွနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ လက်နှိုက်၍ သန့်စင်အောင် အထူးဂရုစိုက်လေသည်..။ တစ်ကိုယ်လုံး စိမ့်သွားအောင် လောင်းချိုးလိုက်တော့မှ လန်းဆန်းရုံမက အားပါပြည့်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်..။
ရေချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး သနပ်ခါး ပါးပါးလိမ်းကာ ကြောင်အိမ်ထဲမှ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး ပျော့ပျော့နှစ်လုံးကို စားလိုက်သေး၏။ ပက်လက်ကုလားထိုင်၌ ခေတ္တ အနားယူနေစဉ် အပြင်မှ ခြေသံများကြား၍ မှောင်စပြုနေသော အခန်းကို မီးဖွင့်လိုက်သည်..။
“ အင်း…ဒီညတော့ သူနဲ့ ဆွေဆွေတို့ရဲ့ ပွဲကို ကြည့်စရာ မလိုလောက်အောင် ဝသွားပြီ… ဟင်း…..ကောင်ဆိုးလေး…နေ့ခင်းက ငါ့ကိုလိုးပြီး ညကျ ငါ့တူမကို လိုးအုံးတော့မယ်… ဆွေဆွေကတော့ သိရှာမှာ မဟုတ်ဘူး သိများသိရင် တော့ နောက်ဆို သူ့ယောက်ျား…အိမ်ကို တစ်ယောက်ထဲ မသွားရ ဆိုပြီး တစ်ချက်လွှတ် အမိန့် ထုတ်မယ် ထင်ပါရဲ့…”
ဤသို့…တောင်စဉ်ရေမရ တွေးနေခိုက် ကျွပ်ကျွပ်အိတ်ဖြင့် စားစရာတွေ ဆွဲပြီး ခပ်သွက်သွက် ဝင်လာသော ပိုင်စိုးကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် မခင်သက်က…
အလောသုံးဆယ် ပုံစံဖြင့် မေးလိုက်ရာ သူက ပြုံးစိစိဖြင့် လက်ညှိုးကိုထောင်ကာ လီးတောင်သလို တဆတ်ဆတ် လုပ်ပြရင်း …
“ တကထဲ…မမကလဲ ..ဒေါချည့်ပဲ..၊ ဖြေးဖြေးပေါ့….ပြောမှာပေါ့..မမရဲ့..”
“ သွား….သူခိုးလေး… မေးတာဖြင့် မဖြေဘူး…ဆွေဆွေမပါဘူးမို့လား…ဒါကြောင့် ..သူ အူမြူးနေ….ဟင်း….”
မခင်သက်ကလည်း ကြိတ်၍ ကျေနပ်နေလျက်ကပင် စိတ်ဆိုးဟန် တမင်ပြု၍ နှုတ်ခမ်းကို စူထားလိုက်လေသည်..။
“ ဟွန့်….တော်တော်ကဲ…၊ ဒီကဖြင့် စောက်ဖုတ်တွေ နာလို့ကောင်းတုန်း…၊ ဒါက ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲ…..၊ လိုးချင်ပြန်ပြီလား…ဒီလီးက…”
မခင်သက်က ဆွေဆွေမပါမှန်း အသေအချာ သိလိုက်ရာ ကြွရွလာသော ကာမစိတ်အဟုန်ဖြင့် ညစ်တီးညစ်ပတ်လေး ခပ်ရွှင်ရွှင် ခပ်မြူးမြူး ပြောလိုက်ပြီး ပိုင်စိုး ကျောပြင်ကို တအုန်းအုန်း ထုလေတော့သည်..။
သူက တဟားဟားရယ်ရင်း သူမ၏ ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်ထားရာမှ ရေချိုးပြီးစမို့ အေးစက်စက်ဖြင့် နွေးနေသည်ဟု ဆိုချင်စရာ ဓါတ်တစ်မျိုး စိမ့်ဝင်နေသော မမသက်၏ တင်ပါးကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်၍ လှိမ့်ချေ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်..။
” တကထဲ မစားရတာ ကျနေတာပဲ…သွား …ရေချိုးလိုက်အုံး၊ သူ့ကိုယ်ကဖြင့် ချွေးစော်တွေကို နံလို့…..”
ဤသို့ ဆိုကာ တွန်းလွှတ်လိုက်သည်..။
“ ဟဲဟဲ…. မမဖုရားရဲ့ အမိန့်တော်မြတ် အတိုင်းပါပဲ..”
ပိုင်စိုးက ရွှတ်တီးရွှတ်နောက် ဆိုရင်း ရေချိုးရန် ပြင်လိုက်သည်..။ ဆပ်ပြာ ၊ သဘက် စသည်ကို ယူပြီးမှ မမသက်ရှိရာသို့ တစ်ခေါက်ပြန်လာကာ….
ဤသို့ ပြောဆိုကာ မခင်သက်၏ အိစက်ထွားကားနေသော တင်သားဆိုင်ကြီးကို တစ်ချက် ပုတ်၍ ထွက်သွားလေတော့သည်..။
မူရင်းရေးသားသူအား credit ပေးပါတယ်